Ukuqonda inqanaba lokuDementia kwenqanaba - Ukwaluphala E Empilo
Ukuqonda inqanaba lokuDementia kwenqanaba
Njengaso nasiphi na esinye isigulo, isifo sengqondo esixhalabisayo sinamanqanaba ahlukeneyo ukusuka kubumnene ukuya kubunzima. Isikali sokuBala ngeDementia (i-DRS) sinceda ukuvavanya kunye nokulandelela imisebenzi yengqondo yabantu abaphethwe kukungasebenzi kakuhle kwengqondo okubangela ukuphazamiseka kwengqondo ekuqwalaseleni, ekucingeni, kwimemori nakwezinye iindawo. Usebenzisa le DRS, unokusebenzela ukuqonda ubuzaza besifo sakho okanye somntu omthandayo.
Isikali sokuBala ngeDementia 2
Ibhalwe nguSteven Mattis, uChristopher Leitten, kunye noPaul Jurica, isikali sokulinganisa isifo sengqondo esixhalabisayo, esaziwa njengeDRS-2, sithabathe indawo yesikali sokuqala sokulinganisa isifo sengqondo esixhalabisayo esibizwa ngokuba yiDRS, okanye iMDRS (iMattis Dementia Rating Scale).
Iindidi ezili-10 zeDementia ichaziwe
Ukuqonda isifo sengqondo esixhalabisayo kunye ne-Alzheimer's
Amanqanaba eDementia yeVascular
Ngubani ovavanya iDRS-2?
Ipapashwe yimithombo yoVavanyo lwezeNgqondo, iDRS-2 ilawulwa ngokukodwa kwizigulana ezineminyaka engamashumi amahlanu anesihlanu ukuya kumashumi asibhozo anesithoba. Isikali sokulinganisa sinemisebenzi engamashumi amathathu anesithandathu enamakhadi amashukumisayo angamashumi amathathu anesibini kwaye ithatha imizuzu elishumi elinesihlanu ukuya kumashumi amathathu ukuyilawula.
Uvavanya ntoni iDRS-2?
I-DRS-2 ivavanya umntu ngamnye kwimimandla emihlanu ekhokelela kumanqaku amahlanu asezantsi. La manqaku asetyenziselwa ukumisela amanqaku apheleleyo kunye nenqanaba lokusebenza kwengqondo. Iindawo ezintlanu zibandakanya:
kangakanani ukupheka brats eziko
Ukuqwalaselwa - kulinganiswa kusetyenziswa izinto ezisibhozo
Ukwakhiwa - kulinganiswa kusetyenziswa izinto ezintandathu
Ingqiqo - kulinganiswa kusetyenziswa izinto ezintandathu
Ukuqalisa / Ukugcina - kulinganiswa kusetyenziswa izinto ezilishumi elinanye
Imemori - kulinganiswa kusetyenziswa izinto ezintlanu
Isebenza nini iDRS-2?
Eli nqanaba lokulinganisa lifunyenwe liluncedo ngakumbi kuvavanyo lokuqala, lokulandela ukuqhubela phambili, kunye nokulinganisa utshintsho kwimisebenzi yokuqonda ekuhambeni kwexesha. Isetyenziswa ngokubanzi ukulinganisa ubuchule bokuqonda kwinqanaba elisezantsi lobuchule be-spectrum, i-DRS-2 iluncedo ngakumbi kuvavanyo kunye nokulandela umkhondo weentlobo ezithile zesifo sengqondo esiquka:
Uhlobo lwe-Alzheimer's dementia
Ukuphazamiseka kwengqondo okunxulumene nobudala okanye isifo sengqondo esixhalabisayo semithambo
Olunye uguqulelo lwe-DRS-2
Iiwebhusayithi ezibonelela nge- DRS-2 Iingcali nazo zihlala zibonelela ngenye indlela yovavanyo. Injongo yenguqulo eyenye kukunciphisa ukubakho kweziphumo zokuziqhelanisa, ezihlala zenzeka nolawulo lweemvavanyo ezininzi.
I-DRS-2 kunye nezinye izinto zeFom
Okubandakanyiweyo kwikhithi ye-DRS-2 zezi:
Amakhadi angamashumi amathathu anesibini okukhuthaza
Iincwadana ezingamashumi amahlanu zokufumana amanqaku
Iifom zeeprofayili ezingamashumi amahlanu
Okubandakanyiweyo kolunye uhlobo lwento yeDSR-2 zezi:
Enye indlela yamakhadi okukhuthaza
Iincwadana ezingama-50 zokufumana amanqaku ngefom
Ukulinganiswa kwesifo sengqondo esixhalabisayo
Inkqubo ye- Ukulinganiswa kwesifo sengqondo esixhalabisayo , eyaziwa ngokuba yi-CDRS, yaveliswa ngo-1979 kwiYunivesithi yaseWashington University of Medicine eSt. Louis, eMissouri, nguJohn C. Morris njengenxalenye yeProjekthi yeMemori nokuguga. Isikali sokulinganisela silinganisa amanqanaba kunye nobukhali beendlela ezininzi zesifo sengqondo esixhalabisayo nangona ekuqaleni sasiphuhlisiwe ukulinganisa isifo sengqondo esixhalabisayo sohlobo lwe-Alzheimer's.
ulahlekelwa njani ngumntwana ongekazalwa
Inkqubo yamanqaku amaHlanu
I-CDRS yinkqubo yokulinganiswa kwamanqaku amahlanu:
Amanqaku e-0 abonisa ukungahambi kakuhle kwengqondo okanye isifo sengqondo esixhalabisayo.
Amanqaku e-0.5 abonisa ukuphazamiseka kwengqondo okuthandabuzekayo okanye okunesidima.
Amanqaku e-1 abonisa ukuphazamiseka kwengqondo okuthobekileyo okanye isifo sengqondo esixhalabisayo.
Amanqaku ama-2 abonisa ukungakhubazeki kwengqondo okanye ukumkelwa kwengqondo.
Amanqaku ama-3 abonisa ukuphazamiseka kwengqondo okanye isifo sengqondo esixhalabisayo.
Njani amanqaku azimiseleyo
Amanqaku amiselwe ngokusekwe kulwazi oluqokelelwe kudliwanondlebe olwenziwe ngokungqongqo. Umntu olawula udliwanondlebe kufuneka alandele izikhokelo ezingqongqo kunye nemigaqo kulawulo kunye nokufumana amanqaku kwiCDRS. Iindawo ezintandathu, okanye imimandla yokuqonda, egutyungelwe kudliwanondlebe yile:
Amakhaya nezinto zokuzonwabisa
Ukugweba / ukusombulula ingxaki
Kwiimeko ezininzi, ubuzaza bomonakalo buyahluka kwisizinda esinye sokuqonda ukuya kwesinye kuba isifo sengqondo esixhalabisayo asiqhubeki ngokufanayo kwingqondo. Umzekelo, umntu unokufumana amanqaku amabini kwimemori, i-1 yokuziqhelanisa kunye nemicimbi yoluntu, kunye ne-0.5 kwiindawo ezintathu ezisele zommandla wolwazi. Ukufumana amanqaku ngokuchanekileyo kwi-CDRS, umlawuli usebenzisa amanqaku ebhokisi nganye kwindawo nganye ukufumana amanqaku e-CDR kwihlabathi lonke kulandela imigaqo engqongqo yokupapashwa.
yintoni venus emele ukuvumisa ngeenkwenkwezi
Amanqanaba ongezelelweyo okulinganisa iDementia
Oku kulandelayo ngamanqanaba ongezelelweyo kunye novavanyo olusetyenziselwa ukulinganisa amanqanaba kunye nobukhali beendlela ezahlukeneyo zesifo sengqondo esixhalabisayo.
Inqanaba loVavanyo lweSifo se-Alzheimer
Inkqubo ye- Isikali soVavanyo lweZifo se-Alzheimer yaphuhliswa kwii-1980s kwaye yayiyilwe kwasekuqaleni njengenqanaba lokulinganisa ukuvavanya inqanaba lokungasebenzi kakuhle kwengqondo kunye nokungaqondi. Iziphumo zibonisiwe kwisikali ukusuka kubumnene ukuya kubunzima.
Isikali seDementia esikelelekileyo
Inkqubo ye- Isikali seDementia esikelelekileyo yaphuhliswa kwii-1960s kunye neenzame zokulinganisa ukonakala kobuntu kunye nokusebenza kwengqondo. Idatha yohlalutyo ivela kwizalamane zabanonopheli bomntu ovavanyiweyo.
Umgangatho woVavanyo lweZifo lwe-Alzheimer
Inkqubo ye- Umgangatho woVavanyo lweZifo lwe-Alzheimer yaqala ukwenziwa nge-1980s kodwa yahlaziywa ukusukela oko yaqalwa. Uvavanyo ngumzamo wokulinganisa ngcono inqanaba lokuphazamiseka kwengqondo kubantu abane-Alzheimer's. Amanqaku angabonisa ukuba leliphi inqanaba le-Alzheimer's.
Uviwo lweMini-yeNgqondo kaRhulumente
Inkqubo ye- Uviwo lweMini-yeNgqondo kaRhulumente Amanyathelo okonakala kwengqondo ngokusebenzisa iphepha lemibuzo elilawulwa ngugqirha. Olu viwo luthathwa njengovavanyo lokufumanisa ubukho besifo sengqondo esixhalabisayo.
kungakanani ukutya okunkonkxiweyo ukondla ikati
Isikali sobukrelekrele babadala
Inkqubo ye- Isikali sobukrelekrele babadala luvavanyo lwe-IQ, olubonisa isahlulo esivavanya ngokukodwa imemori. Eli candelo lememori, ngakumbi, lithathwa njengelibalulekileyo ekufumanekeni nasekuchongeni amanqanaba okuqala eDementia kunye ne-Alzheimer's.
Xa uqala ukuvavanya ukuba ingaba isigulana sinesifo sengqondo esixhalabisayo okanye i-Alzheimer's, ezahlukeneyo iimvavanyo zonyango ziqhelekileyo ziyalelwa ngoogqirha kubandakanya, kodwa kungaphelelanga apho:
Ukuvavanywa kwengqondo kweMRI
Izixhobo zoVavanyo eziSebenzayo
Zombini iDRS-2 kunye neCDRS zizixhobo ezisebenzayo ekuvavanyeni imisebenzi yokuqonda yabantu abaneminyaka engamashumi amahlanu anesihlanu okanye nangaphezulu abaneendlela ezahlukeneyo zesifo sengqondo esixhalabisayo. Uvavanyo lwe-Diagnostic lubalulekile ukukhupha ezinye izizathu zokuhla kwengqondo okanyeukukhubazeka kwememori.
Umculo Genres Malunga Toys Imvelaphi Endlela Namatools Ukuthintela Umlilo Nokukhusela Iindidi E Costumes
Ngaphezulu Size Wedding Apparel
yimalini onokunikela ngayo ukuze uphumelele
ukwahlukana nomntu kakuhle ngaphezulu kwesicatshulwa
uyenza njani imisonto yamakhandlela ekhaya
Inja iyeka ukukhula kwiminyaka emingaphi
indlela yokusonga idola kwi rose